2020 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
မြန်မာကနေ နိုင်ငံခြားစကားတွေ ဘာသာပြန်ဖို့ Google Translate APK and iOS
Mr. Win Hlaing at 11:18:00 AM 0
မြန်မာကနေ နိုင်ငံခြားစကားတွေ ဘာသာပြန်ဖို့ Google Translate ထက် ပိုကောင်းတဲ့ ဆော့ဝဲလ်။မင်္ဂလာပါ။ နည်းပညာချစ်သူကနေ ဒီလို ပိုစ့်တွေ မတင်တာကြာပြီးနော်။ အခုတစ်ခါမှတော့ အားလုံးအတွက် အရမ်းအသုံးဝင်မယ့် ဆော့ဝဲလ်တစ်ခု မျှဝေချင်ပါတယ်။ ဆော့ဝဲလ်နာမည်ကတော့ VoiceTra ပါ။ ဒီဆော့ဝဲလ်က Google Translate လို မြန်မာကနေ နိုင်ငံခြားစကားတွေ ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဆော့ဝဲလ်က Google Translate ထက် ပိုကောင်းတဲ့အချက်က မြန်မာစာကားကို အတိအကျမှန်အောင် ဘာသာပြန်ပေးနိုင်တာပါ။ ဥပမာ- အင်္ဂလိပ်ကနေ မြန်မာစာ/ မြန်မာကနေ အင်္ဂလိပ် ကို ဘာသာပြန်မလား? အတိအကျမှန်အောင် ဘာသာပြန်ပေးနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့ အချက်တစ်ခုကတော့ အသံနိုင် ဘာသာပြန်ခိုင်းလို့ရတဲ့စနစ်ပါ။ အဲ့ဒါက ကိုယ်ဘာသာပြန်စေချင်တာကို မြန်မာစကားနဲ့ ပြောလိုက်ရင် အင်္ဂလိပ်စကားကို ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီVoiceTra ဆော့ဝဲလ်ထဲမှာ မြန်မာ၊အင်္ဂလိပ်အပြင် တခြား ဘာသာစကားတွေ အများကြီးလည်း အတိအကျမှန်အောင် ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ်စကားကို လေ့လာနေတဲ့သူတွေလည်း ဒီဆော့ဝဲလ်နဲ့ လေ့ကျင့်လို့ရတယ်နော်။ဒီVoiceTra ဆော့ဝဲလ် စမ်းအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် အောက်က လင့်မှာ ဆော့ဝဲလ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။Android အတွက် ဆော့ဝဲလ်ဒောင်းရန်
Downloader Internet Download Manager PC Downloader
IDM ( Internet Download Manager ) 6.38 Build 10
Maung Pauk at 1:19:00 PM 0
2020 ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ ထွက်ထားတဲ့ IDM ( Internet Download Manager ) 6.38 Build 10 ကို Full Version Free သုံးချင်သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
Download IDM 6.36 Build7Full : 9.9 MB
အထဲမှာ HD Camera ပါပြီး အထဲကအခြေအနေတွေကို ဖုန်းထဲကနေ ကြည့်ရှုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ မြန်မာငွေ ၅ သိန်းခွဲကျော်တန် Smart Oven
Xiaomi ဟာ Smart Device ထုတ်လုပ်မှုမှာ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီး အခု တကယ့် Smart Oven တစ်လုံးကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်..
Smart Oven ဆိုတဲ့အတိုင်း တကယ် Smart ဖြစ်နေပါတယ်..
Oven ထဲမှာ HD Camera တစ်လုံးကိုတပ်ဆင်ပေးထားပြီး Oven ထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ ဟင်းတွေ၊ မုန့်တွေ စတဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ့အခြေအနေတွေကို ဖုန်းထဲကနေ ကြည့်ရှုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်..
2.4 GHz Wifi connection စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီး ဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်.. Oven ရဲ့ Firmware ကိုတောင် ဖုန်းထဲကနေ Update လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့.. Oven တောင် Firmware နဲ့..
အပူချိန် 200 ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ကိုရောက်ဖို့ ၆ မိနစ်ကနေ ၈ မိနစ်ကြားပဲကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်..
Oven ကို အဆင့်မြင့် ကာဗွန်ဖိုက်ဗာသားနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး တန်ဖိုးကတော့ 423 USD (မြန်မာငွေ ၅ သိန်းခွဲကျော်ခန့်) ဖြစ်ပါတယ်..
Ref : Xiaomify
စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ရောင်းထွက်သွားတဲ့ ၇၁၉၈ ဒေါ်လာ(မြန်မာငွေ သိန်း ၁၀၀ နီးပါး)တန် ဖောက်ထွင်းမြင် တီဗွီ
Maung Pauk at 6:48:00 PM 0
Smartphone တင်မက Smart TV လောကမှာလည်း ဆရာတစ်ဆူဖြစ်လာတဲ့ Xiaomi ဟာ ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖောက်ထွင်းမြင်ရတဲ့ Mi Transparent TV တရားဝင် ရောင်းချလိုက်ပါတယ်..
၅၅ လက်မ OLED စကရင်နဲ့ အထူးပါးလွှာတဲ့ 5.7mm ultra-thin ဒီဇိုင်းနဲ့ဒီ TV ဟာ 1.07 billion primary colors, DCI-P3 93% wide color gamut, 120Hz refresh rate, MEMC motion compensation, 1ms transient response နဲ့ Gaming-level Display နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာပါ..
Chip ကိုတော့ MediaTek 9650 customized TV chip နဲ့တပ်ဆင်ပေးထားပြီး quad-core A73 processor နဲ့ Mali-G52 graphics card ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်..
အရင် Generation တွေထက် ၃၀% ပိုမိုမြန်ဆန်စေပြီး စျေးနှုန်းကတော့ 49,999 YUAN ($7198)(မြန်မာငွေ သိန်း ၁၀၀ နီးပါး)ကျသင့်ပေမယ့် ဒီနေ့မှာပဲ ရောင်းကုန်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်..
၂၀၂၀ ဇူလိုင်လအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံး Smartphone များ
Maung Pauk at 10:35:00 PM 0
Smartphone တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုင်းတာစစ်ဆေးပေးတဲ့ Antutu ရဲ့ စာရင်းအရ
Global Top 10 Flagship Smartphone တွေကတော့−
တို့ဖြစ်ကြပြီး ဒီထဲမှာ Snapdragon မဟုတ်ဘဲ MediaTek ရဲ့ Dimensity 1000+ ကပထမဆုံး Global Top 10 စမတ်ဖုန်းနဲ့အတူ နေရာယူလာပါတယ်.. သူကတော့ iQOO Z1 ဖြစ်ပါတယ်..
အလယ်အလတ်ဆင့် Mid-range တွေမှာတော့−
Huaawei nov 7i
Source : Antutu Benchmark
Backup and Recovery Tutorial Tutorial Videos Video
ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Windows နဲ့ Software တွေကို အခြား Hard Disk သို့မဟုတ် SSD ဆီကို လွယ်လွယ်ကူကူ ကူးနည်း
ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Windows က အဆင်ပြေတယ်၊ Software တွေလည်း အဆင်ပြေတယ် စတဲ့အခြေအနေအတိုင်း ထပ်တူကျအောင် အခြား Computer တစ်လုံးမှာလည်း သုံးချင်တယ်၊ အချိန်ကုန်လည်းသက်သာရမယ် ဆိုရင် လုပ်နည်းတွေ အများကြီးထဲက အဆင်ပြေမြန်ဆန်တဲ့ နည်းလမ်းရှိပါတယ်..
ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Windows နဲ့ Software တွေကို အခြား Hard Disk သို့မဟုတ် SSD ဆီကို လွယ်လွယ်ကူကူ ကူးနည်းကို Software Pro Version တကွ တင်ပေးထားပါတယ်..
Download Software : https://www.maungpauk.org/2020/07/aomei-backupper-580-pro-and-all-edition.html
Maung Pauk at 11:40:00 PM 0
AOMEI Backupper ဆိုတာ Windows ကို Backup လုပ်ထားနိုင်တယ်.. Install လုပ်ထားတဲ့ Software တွေကို Backup လုပ်ထားနိုင်တယ်.. Backup လုပ်ထားတဲ့ Windows နဲ့ Software တွေကို ကိုယ့် Hard Disk မှာ သာမက အခြား Hard Disk တစ်ခုခုမှာ အလွယ်တကူပဲ Restore လုပ်ပေးနိုင်တယ်..
Hard Disk တစ်ခုလုံးကို Partition နဲ့တကွ အခြား Hard Disk တစ်ခုခုဆီကို Clone လုပ်နိုင်တယ်.. မြန်ဆန်ပြီး တိကျမှုလည်းရှိတယ်..
ကိုယ်က လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Windows နဲ့ Software တွေ အဆင်ပြေ ကောင်းမွန်နေတယ်.. ဒီအခြေအနေကြီး တစ်ခုလုံးကို အခြားကွန်ပျူတာ တစ်လုံးက Hard Disk ဆီကို ကူးယူပြီး အခြားကွန်ပျူတာမှာ ချက်ချင်းပဲ ကိုယ့် ကွန်ပျူတာ Windows နဲ့ Software နဲ့ထပ်တူ အသုံးပြုနိုင်တယ်..
AOMEI Backupper မှာ Backup, Restore နဲ့ Clone ဆိုပြီး Main Function ကြီး ၃ ခုရှိပါတယ်..
Function တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ကျွန်တော်တို့အတွက် အဆင်ပြေအသုံးတည့်နိုင်မယ့် Function တွေပါတာမို့ ခုပဲ Download ရယူနိုင်ပါပြီ..
Home Page : https://www.aomeitech.com/aomei-backupper.html
Download AOMEI Backupper 5.8.0 Pro and All Edition : 115.2 MB
၁. Antivirus ကိုပိတ်ပါ..
၂. Setup နဲ့ Install လုပ်ပါ..
၃. License_Cleaner.bat ကို Run ပါ..
၄. Desktop ပေါ်က AOMEI icon ကိုညာကလစ်ထောက်ပြီး Open File Location ကိုနှိပ်ပါ..
၅. အဲဒီထဲမှာ Version.ini ကိုညာကလစ်ထောက်ပြီး Edit ကိုနှိပ်ကာ versionCode=3 ကိုပြောင်းပါ..
၆. Save လုပ်တဲ့အခါ Desktop ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ် Save ပြီး ခုနက Edit လုပ်နေတာကို ပိတ်ပစ်ပါ..
၇. Desktop ပေါင်က Version.ini ကိုကူးထည့်ပြီး Replace လုပ်ပါ..
၈. ခုနက ဒေါင်းထားတဲ့ထဲက Backupper_Registrator.exe ကိုလည်း ကူးထည့်ပြီး Run လိုက်ပါ..
၉. ကီးဖြည့်ရမယ့်အကွက်ထဲမှာ Serials.txt ဖိုင်ထဲက ကီးတစ်ခုခုကို ယူပြီးဖြည့်လိုက်ပါ..
Samsung Galaxy Note 20 Ultra ရဲ့ Hands On Video ထွက်ပေါ်လာ
Maung Pauk at 2:06:00 PM 0
Samsung Galaxy Note 20 Ultra ကို တရားဝင် ကိုင်ခွင့်ရပြီ ဆိုပြီး Leaker တွေရဲ့ Youtube ဖြစ်တဲ့ Jimmy is Promo မှာ ၁ မိနစ် နဲ့ ၂၃ စက္ကန့်စာ ဗွီယိုဖိုင်လေးတစ်ခု July 8 ရက်နေ့က ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်..
Model နံပတ်ကို SM-N986U လို့ပေးထားတဲ့ အဲဒီဖုန်းဟာ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ဖြစ်တယ်လို့လည်း သူက ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်..
မကြာခင်ကလည်း Samsung Russia ဆိုဒ်မှာ Galaxy Note 20 Ultra ရဲ့ပုံ ၂ ပုံကို တင်ခဲ့ပြီး မကြာခင် ပြန်လည်ဖယ်ရှားသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်..
လာမယ့် သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်မယ့် Galaxy Unpacked ပွဲမှာ Galaxy Note Series တွေကို ထုတ်ဖေါ်မိတ်ဆက်သွားမယ်လို့ ယုံကြည်ရပါတယ်.. စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ ဒီ High-end Smartphone မှာ ဘာတွေကို မျှော်လင့်နိုင်မလဲ.. ဘာတွေဘာမလဲ.. အောက်က ဗွီဒီယိုမှာ အနည်းငယ် ဆွေးနွေးထားပါတယ်..
မြန်မာကနေ နိုင်ငံခြားစကားတွေ ဘာသာပြန်ဖို့ Google T...
အထဲမှာ HD Camera ပါပြီး အထဲကအခြေအနေတွေကို ဖုန်းထဲက...
စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ရောင်းထွက်သွားတဲ့ ၇၁၉၈ ဒေါ်လာ(...
၂၀၂၀ ဇူလိုင်လအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံး Smartph...